ဘိုးဘိုးအောင် ဖန်ဆင်းတဲ့ ဝ လား...... (၃) ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကျဆုံးခြင်း (သို့) UWSA ဝ စစ်တပ် ပေါ်ပေါက်လာပုံ | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
Posted by Unknown at 11:33:00 AM0comments
မေလ ၂၈ ရက်
ပဲခူးရိုးမမှ လွင့်စင်သွားခဲ့သော မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ခ) ဗကပဟာ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ပန်ဆန်းမှာ ဌာနချုပ်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ပီး ဆက်လက် လှုပ်ရှားနေပါတယ်…… ဗကပစစ်တပ်၏ တပ်မှူး အားလုံးနီးပါးဟာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု များစွာပါဝင်ပါတယ်…… တပ်မှူးတချို့ဟာ ဝ လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး အများစုကတော့ ကိုးကန့်တရုတ်၊ ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် အခြားလူမျိုးစုများ ဖြစ်ပါတယ်…… ဗမာကတော့ မတ်(ခ)လီနင်ဝါဒီ၊ ပါတီခေါင်းဆောင် များနှင့် တပ်ဖွဲ့အသီးသီးတွင် တွဲဖက်တာဝန် ယူထားသော နိုင်ငံရေးမှူးတွေသာ ရှိပါတယ်….
တိုင်းရင်းသားတွေ ကွန်မြူနစ်ပါတီ အလံအောက် ရောက်လာကြသည်ရတာကတော့ ဝါဒရေးရာ (Ideology) ယုံကြည်မှုထက် လူမျိုးစုဆိုင်ရာ မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ ယေဘုယျ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး စိတ်အခံတွေကြောင့် များပါတယ်….. ခန့်မှန်းခြေအရ ဗကပ တပ်ရဲ့ အောက်ခြေတပ်သားစု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာ တရုတ် - မြန်မာ နယ်စပ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ တောင်ပေါ်သား လူမျိုးစု တစ်ခုဖြစ်သော ဝ မျိုးနွယ်စုမှ ဝ လူမျိုး အမျိုးသားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. ဒါကြောင့် ဗကပက ခွဲထွက်လာချိန်မှာ ဝ တွေဟာ ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့ UWSA ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်…..
တရုတ်ပြည်ရဲ့ အထောက်အပံ့နည်းလာတဲ့အတွက် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗကပ ဟာ ၎င်းအုပ်စိုးရာ နယ်မြေအတွင်းမှာ ပါတီရံပုံငွေ ရစေရန် ဘိန်းစိုက်သူ များနှင့် ဘိန်းရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသူများကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ကောက်ခံပြီး ခွင့်ပြုထားခဲ့သည်။ ထိုမှစတင်ကာ ဗကပ အုပ်စိုးရာ လက်အောက်ခံ ဒေသတွေမှာ ဘိန်းလုပ်ငန်းတွေ တွင်ကျယ်လာပီး ဗကပ တပ်မှူးများကိုယ်တိုင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုတွေမှာ ပါဝင်ပါတ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်…. ဗကပ အုပ်စိုးမှု ဒေသမှ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဘိန်းတွေရဲ့ ပြဿနာဟာ တရုတ်ပြည်အတွက် ပြဿနာ အကြီးအကျယ်ဖြစ်လာပါတယ်….. ပို၍ ပို၍များလာတဲ့ ဘိန်းဖြူ ပြဿနာဟာ မြန်မာနဲ့ တရုတ်နယ်ခြား ယူနန်ပြည်နယ်မှတစ်ဆင့် ကူမင်းမှသည် ဟောင်ကောင်သို့တိုင် ခရီးဆန့်နေ ပါတော့တယ်….. ဒီအတွက် ဗကပ လက်အောက်ခံ ဒေသများမှ ထွက်ရှိနေတဲ့ ဘိန်းဖြူ ဘိန်းမဲများဟာ ဗကပ ခေါင်းဆောင်များသာမက တရုတ်ပြည်အတွက်ပါ ခေါင်းခဲစရာတွေ ဖြစ်လာလို့နေပါတယ်……
၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှသည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ အတွင်း ဗကပဟာ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင်းရှိ အခြားသော ကွန်မြူနစ်ပါတီများလို တရုတ်ပြည်မှ အလွန် များပြားသော အထောက်အပံ့များ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပီကင်းအစိုးရရဲ့ ၎င်းတို့နိုင်ငံစီးပွားရေးကို ခေတ်မှီစေဖို့၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုကို မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးပန်းတဲ့အခါမှာတော့ ၎င်းတို့ပေးနေတဲ့ အကူအညီတွေကို လျှော့ချလိုက်ရပါတော့တယ်…… ပီကင်း အစိုးရရဲ့ အကူအညီတွေ ဖြတ်တောက်မှုကြောင့် အထိနာသွားသူတွေကတော့ “မလေးရှား ကွန်မြူနစ်ပါတီ” နဲ့ “ထိုင်း ကွန်မြူနစ်ပါတီ” တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. မလေးပါတီကတော့ ဗကပ ကဲ့သို့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များကို ဦးတည်သွားပီး ထိုင်းပါတီကတော့ လုံးဝကို ပြိုလဲသွားခဲ့ရပါတယ်….
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ ဗကပ ပါတီတွင်း တော်လှန်ပုန်ကန်မှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်…… ထိုအချိန်မှာ တရုတ်ပြည်က ဗကပ ခေါင်းဆောင်များနဲ့ အဆင့်မြင့် ကေဒါများကို ၎င်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ ခိုလှုံခွင့်ယူရန် စတင် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်… ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ကမ်းလှမ်းမှုမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံသူတွေကို တရုတ်အစိုးရမှ သင့်တင့်တဲ့ ပင်စင်ပေးဖို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်…… သို့သော် ကြပ်တည်းလာတဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အခက်အခဲများကြောင့် ဗကပ အဖွဲ့များ လက်နက်တပ်ဆင်နိုင်ရန်၊ ၎င်းတို့ အုပ်စိုးရာ နယ်မြေအတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံတွေကို ထိမ်းသိမ်းဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်…. ဒီအခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ဗကပဟာ ဘိန်းကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုသာမက ဒေသခံ လူထုအပေါ်မှာပါ အဆမတန် အခွန်တွေ တိုးမြှင့်ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်….. ထိုသို့အခွန်တိုးမြှင့် ကောက်ခံလိုက်သည့်အတွက် အရှေ့မြောက်ပိုင်း နယ်စပ်ဒေသရှိလူထုနှင့် ဗကပ ဗဟိုကော်မတီ ခေါင်းဆောင်များကြား အက်ကြောင်းများ ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်…..
သို့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗကပ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေဟာ တရုတ်ရဲ့ ဖိအားပေးမှုကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ဆန့်ကျင်မှုကို လုပ်ဆောင်ရပါတော့တယ်….. ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ အကျိုးရလာဘ်ကတော့ ဗကပရဲ့ မူဝါဒကို မြတ်နိုးတဲ့ ပါတီရဲ့ အပေါ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနဲ့ ဘိန်းကုန်ကူးရာမှာ အမြတ်အစွန်းများစွာ ရနေတဲ့ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေအကြား ပြင်းထန်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ဖန်တီးပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်….. သို့သော် နောက်ကွယ်မှ တရုတ်ရဲ့ ဖိအားကြောင့် ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟာ ဘိန်းတိုက်ဖျက် ရေးကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ခဲ့ရာမှာ ပါတီတွင်းအကွဲအပြဲကို မလွဲမရှောင်သာ ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတော့တယ်……
ဗကပ တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုဟာ စောလျင်စွာ ဖြစ်ဖို့ရှိပေမယ့် အောက်ခြေ ရဲဘော်များနဲ့ ဒေသခံ တပ်မှူးတွေဟာ အဆိုပါကိစ္စအပေါ် တရုတ်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အတွက် အချိန်ယူ အကဲခတ်နေခဲ့ကြပါတယ်….. ထို့အတူပဲ ဗကပ ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို တရုတ်အရာရှိများက နယ်စပ်ကတစ်ဆင့် မှန်လုံဇိမ်ခံကားကြီးများနဲ့ ခေါ်ဆောင်သွားလေ့ ရှိတာကိုလည်း သိရှိထားတဲ့ သူတို့အတွက် ပုန်ကန်မှုဟာ လွယ်လွယ်ကူကူ စတင်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ်……. ၁၉၈၉ ခု မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာတော့ ဗကပ ဗဟိုကော်မတီရဲ့ တိုင်းရင်းသားခြင်း ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှု၊ အခွန်မတရားကောက်မှုတွေကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ လက်အောက်ခံ ဒေသများထဲမှ ကိုးကန့်အဖွဲ့ဟာ ပထမဦးစွာ ဗကပရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို တရားဝင် စိန်ခေါ်လိုက် ပါတော့တယ်……
ကိုးကန့်ဒေသက စ လိုက်တဲ့ တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုဟာ ဝ ဒေသကိုပါ ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီး တရုတ် မြန်မာ နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ဗကပ အုပ်စိုးရာ ဒေသတွေ အားလုံးကို လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်….. ဝ တပ်တွေဟာ ပန်ဆန်းရှိ ဗကပတို့ ရုံးစိုက်ရာတောင်ကုန်းကို အမြှောက်နှင့် ပစ်ခတ်ခြင်းမှ စတင်ကာ ပန်ဆန်းရှိ ဗကပ ဌာနချုပ်ကျဆုံးသွားခဲ့ရပြီး ဗကပ၏ အသံလွှင့်ရုံကိုလည်း သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်…… ပါတီဌာနချုပ်တွင် ချိတ်ဆွဲထားသော မာ့ခ်၊ လီနင်၊ မော်စီတုန်း အစရှိတဲ့ ကွန်မြူနစ် ဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ နာမည်ကြီး ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဟာ ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်…. ပန်ဆန်းကို သိမ်းပိုက်အပြီး ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ “ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးရေးပေါ်လစီများ” ဆိုသည့် ပထမဆုံး ဗကပကို ရှုတ်ချပြစ်တင်သည့် အသံလွှင့်ချက် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၈ ရက် နေ့မှာတော့ ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ နောက်ထပ် အသံလွှင့်ချက် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်…. အသံလွှင့်ချက်ထဲမှာ ပါဝင်လာ တာကတော့
“ဗကပဟာ ဘာတိုးတက်မှုမှ မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ...။ ကျွန်တော်တို့အမြင်ကို ပြောရရင် ခေါင်းဆောင် တချို့ဟာ အာဏာကို အသေဖက်တွယ် ထားကြလို့ပဲ။ မှားယွင်းတဲ့လမ်းစဉ်ကို ခေါင်းမာမာ ဆက်ကိုင်ထားကြလို့ပဲ။ ဒီလူတွေဟာ တကယ့်အရှိတရားနဲ့ ကင်းကွာနေကြတယ်။ ငါတကောဝါဒနဲ့ ဂိုဏ်းဂဏဝါဒကို ကျင့်သုံးနေကြ တယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အခြေအနေတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ဖို့ သရုပ်ခွဲ စိစစ်ဖို့ ပျက်ကွက်ကြတယ်။ တကယ့်အစစ်အမှန် ရုပ်အခြေအနေကို ဥပေက္ခာ ပြုထားကြတယ် ...။ သူတို့ဟာ ဝဒေသက လူထုကို လိမ်ညာခဲ့ကြတယ်။ လိမ်လုံးညာလုံးတွေ ဝါဒဖြန့်ချိရေး တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို သူတို့ရဲ့ အယောင် ဆောင်တော်လှန်ရေးထဲ ဆွဲခေါ်ခဲ့ကြတယ်။”
“ခေတ်မီလက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရန်သူကို ဗလာချီ အိုင်ဒီအိုလိုဂျီဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် အနိုင်ယူနိုင်မှာလဲ။ သဘောတရားနဲ့ လက်တွေ့မပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့ စစ်ရေးနည်းနာ တွေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် အနိုင်တိုက်နိုင်မှာလဲ ...။ ကျွန်တော်တို့ ဝဒေသလူထု ကြီးဟာ ပြည်တွင်းဖြစ်စေ၊ ပြည်ပဖြစ်စေ ဘယ်ကျူးကျော်ရေး တပ်ဖွဲ့ကိုမှ လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းညိတ် မလုပ်ဘူး။ အလိုလိုက် အကြိုက်မဆောင်ဘူး။ ယဉ်ကျေးမှုအရာနဲ့ စာပေအရာမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆင်းရဲပါတယ်။ ခေတ်နောက်ကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်တော့ သိပ်ခိုင်တယ်။”
“အတိတ်က ကာလတစ်ခုမှာ ဗကပထဲက စိတ်ယုတ်၊ စိတ်ပုတ်ရှိတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ အာဏာလုပွဲနောက် လိုက်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဝဒေသ ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ ဘဝတွေ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရပါသလဲ ...။ သိပ်ကို ကြမ်းတမ်း ခက်ထန်ခဲ့ရတယ်။ အခွန်အကောက်တွေ တိုးကောက်ပြန်တော့ လူထုအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဟာ ပိုလေးလံ ကြီးမားခဲ့ရတယ်။ သိပ်ကိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ်။ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ လူထုအနေနဲ့ ပုန်ကန်ထကြွမှုအခြေအနေတစ်ခုကို ဘယ်မှာ ရှောင်လို့ရတော့မှာလဲ” အစရှိတာတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်…..
ဗကပ တပ်တွင်းပုန်ကန်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း ပန်ဆန်းဟာ တစ်ခြားသော မြို့တွေနဲ့မတူအောင် တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်….. တရုတ် - မြန်မာ နယ်နိမိတ်မျဉ်းရှိ နာမ်ခမြစ်လေး၏ မြင်းခွာပုံ အကွေ့တစ်ခုမှာ တည်ရှိတဲ့ ပန်ဆန်းတွင် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်ဘက်လုံးရဲ့ အကောင်းဆုံးတွေ စုစည်းနေသလို ရှိပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုအဖြစ် ပန်ဆန်းမှာ အသစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံများ၊ ဇိမ်ခံကားများ၊ ပလက်ဖောင်းကိုယ်စီ လမ်းမကြီးများ၊ နောက်ဆုံးပေါ် စားသုံးကုန်များ အပြည့်တင်ထားသည့် ဈေးဆိုင်များပေါ်တွင် အရိပ်ထင်လျက် ရှိသည်။ အဆိုပါဒေသမှာ တရုတ် ငွေကြေးကိုသာ လက်ခံ သုံးစွဲကြပါသည်။ တန်ဖိုးမရှိသလောက် ဖြစ်သော မြန်မာကျပ်ငွေကို ဘယ်သူကမှ မလိုချင်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာဟာ တရုတ်ပြည်တော့ မဟုတ်ပါ မြန်မာပြည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. (စကားဖြတ် ပြောရမယ်ဆိုရင် ဝ အထူးဒေသ ၂ စီးပွားရေး မြို့တော် ပန်ဆန်းကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာ မြန်မာကျပ်ငွေသာမက အမေရိကန်ဒေါ်လာလည်း အသုံးပြုလို့ မရပါဘူး……..)
အဆိုပါဒေသမှာ တင်းကြပ်တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်စရာမရှိပါဘူး….. ဗဟိုအစိုးရမှ ကန့်သန့်ထားတဲ့ အချို့သော ကုန်စည်အမျိုးအစားများ ကုန်သွယ်ခြင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းများအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် အထိန်းအချုပ်များ အတွက်လည်း စိတ်ပူစရာမရှိပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုသော် ပန်ဆန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသများမှာ ဗဟိုအစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မရှိသောတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. လူဦးရေး ၂၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိ၍ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၁၅,၀၀၀ ကျော်ကျယ်တဲ့ ပန်ဆန်းမြို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ဝ ဒေသရဲ့ စီးပွားရေးမြို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်… အဆိုပါဒေသကို ဝ ပြည်နယ်တပ်မတော် UWSA က ထိမ်းချုပ်ထားပါတယ်…… အဆိုပါ UWSA ဟာ တစ်ချိန်က ဗကပ ပါတီရဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ဝ လူမျိုးစုတွေကနေ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် လူမျိုးစု လေးခုထဲမှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်….
ဗကပ တပ်တွင်းပုန်ကန်မှု အပြီး လ အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ UWSA နဲ့ ဗဟိုအစိုးရတို့ကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်….. အဆိုပါ သဘောတူညီချက်အရ UWSA ဟာ ယခင် ဗကပ တုန်းကကဲ့သို့ ၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်တပ်များ ဆက်လက် ထားရှိခွင့် ရသကဲ့သို့ အစိုးရမှလည်း ၎င်းတို့ အုပ်စိုးရာ နယ်မြေတွေကို ဆက်လက်ထိမ်းချုပ်ခွင့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်…… အပြန်အလှန်အနေနဲ့ UWSA မှ အစိုးရတပ်များအား မတိုက်ရန်၊ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ အခြားသော အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး အဖွဲ့များ၊ လူမျိုးစုများနှင့် မဆက်သွယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်…
ဗဟိုအစိုးရနှင့် နားလည်မှုယူထားတဲ့ အဆိုပါ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်အရ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ပန်ဆန်းတွင် ဆက်ဆံရေးရုံး တစ်ရုံး ထားခွင့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါရုံးတွင် အရာရှိအဆင့် ဆယ်ယောက်ခန့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ သို့သော် အဆိုပါအရာရှိများမှာ သူတို့နေထိုင်ရာ ဝင်းထဲမှ အပြင်သို့ ထွက်ခဲပါတယ်။ ပန်ဆန်းရှိ တစ်ခုတည်းသော မြန်မာအလံဆို၍ အစိုးရဆေးပေးခန်းတွင်သာ ရှိပါတယ်။ ကျန် ရုံးအဆောက်အအုံ အားလုံးတွင် လွှင့်ထူထားသည်မှာ UWSA အလံနှင့် ဝ ပြည်နယ် အလံသာဖြစ်သည်။ အပြာ၊ အနီ နောက်ခံထက်တွင် ကြယ်တစ်ပွင့်၊ နေတစ်စင်း၊ ဓားမြှောင်နှင့် လှံတံကန့်လန့်ဖြတ်ထားသော အမှတ်အသားတစ်ခု ပါဝင်သည့် အလံတော် ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဂျာနယ်လစ် Bertil Lintner ရေး၍ ကျော်ဝင်း ဘာသာပြန်သည့် The Rise and Fall of the Communist Party of Burma မှ အချက်များအား စာဖတ်ရသူ အဆင်ပြေစေရန် ပြန်လည် စီပီး တင်ဆက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…..
ဓါတ်ပုံ ဗကပ ခေါင်းဆောင် သခင်ဗသိန်းတင်နှင့် တစ်ချိန်က ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ဖခင်ကြီးများ၏ ဓါတ်ပုံများနှင့် ပဏာရနေသည့် ပန်ဆန်းရှိ ဗကပ ဌာနချုပ်